Krishna Lmc on Flipboard
27 Flips |4Magazines | 1 Follower | @krishnalmc | Keep up with Krishna Lmc on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Krishna Lmc”
“ သူခိုး ” Dhamma Danã Source ► www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
ကာယကံရဲ့ မှတ်တမ်းများလည်း ပြသထားပါတယ်
အဓိပ္ပါယ် ရောက်ချင်ရာရောက် ဟာသများ
ဗြဟ္မာစိုရ်၏ ခြေလှမ်းများ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောပါပြီ
ก่อนนอน สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา นึกทบทวนบุญที่ได้ทำมาทั้งหมดในวันนี้ แล้วอธิษฐานจิตให้บิดามารดา ครอบครัวและสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกัน ปล่อยวางทุกข์ทั้งหลายไปให้หมด และหลับในกลางแห่งความสว่างของพระพุทธเจ้ากัน คำบูชาพระรัตนตรัย "อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ" (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ) คำแปล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประพฤติปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ www.facebook.com/ThanavuddhoStory
ရယ်ရရင် Like မယ် ပြီးရင် share ပေးပါ
ပြတင်းပေါက် ကနေ ပြူတစ်ပြူတစ်
အလွန်အားရှိစရာ (ကျားသနား မှ နွားချမ်းသာမည့် ဒီမိုကရေစီ) ( By ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ) "ဒါတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမယ်လေ။ ကျွန်မတို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အမြဲပြောတယ်။ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ခင်မင်အောင် ပေါင်းပါ။ သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင် သိဖို့ လိုတယ်။ အဆင်ပြေဖို့ လိုတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ ဒီတပ်မတော် သဘောမတူဘဲနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်တော့မှ မခိုင်မြဲနိုင်ဘူး။ အခု ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ မခိုင်မြဲနိုင်ဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရကို တပ်မတော်ရဲ့ သဘောဆန္ဒ ရှိသ၍သာ ဒီလွှတ်တော်က တတ်နိုင်တယ်။ တခြားဟာတွေ ကျွန်မတို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောနေစရာမလိုဘူး။ တပ်မတော် အလိုရှိ သလောက်ပဲ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ကျွန်မတို့ လွှတ်တော်ရဲ့ သက်တမ်းက ရှိမှာ။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ လက်တွေ့ကျကျ တပ်မတော်ကနေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီကို လက်ခံ နားလည်လာမှ တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအုပ်မြစ် ကျွန်မတို့ ချနိုင်မယ်။ " (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) Credit to >>ကျား ခင်စိန် <<်
စက်သုံးဆီ တရားမဝင် တင်သွင်းမှု ပိုမိုထိရောက်စွာ အရေးယူမည်ဟုဆို ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၀ စက်သုံးဆီ တရားမဝင် တင်သွင်းမှု ပြုလုပ်နေသူများကို ပင်လယ်ရေကြောင်း အကောက်ခွန်ဥပဒေနှင့် အရေးယူမှုသည် ထိရောက်မှု မရှိသည့်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ပြဋ္ဌာန်းထားသောပို့ကုန် သွင်းကုန် ဥပဒေဖြင့် အဓိကကိုင်တွယ် အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီး ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ရဲဝင်းက ပြောကြားသည်။ စက်သုံးဆီ တရားမဝင် တင်သွင်းမှု အများအပြား ရှိနေသော်လည်း ပင်လယ်ရေကြောင်း အကောက်ခွန် ဥပဒေအရ ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်ရုံနှင့် မလုံလောက်တော့ဘဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေပုဒ်မ ၈ အရ ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်နှင့် ငွေဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးလည်း ဖြစ်သူ Read more => http://www.todaymyanmar.net/2013/08/blog-post_6408.html